पेरिसमा ल्याटिन क्वार्टरमा पैदल | यात्रा समाचार
पेरिसको ल्याटिन क्वार्टरमा पैदल यात्रा
मारिएला क्यारिल | | पेरिस, के हेर्ने
सबैभन्दा मनमोहक कुनाहरू मध्ये एक पेरिस छ ल्याटिन क्वार्टर, सेईनको बाँया तटमा, पाँचौंमा घुँडा टेक्नु फ्रान्सेली राजधानी बाट। यो ल्याटिन क्वार्टरमा छ कि ला सोर्बोन, उदाहरणका लागि, अन्य शैक्षिक संस्थाहरू मध्ये एक ऐतिहासिक र सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण साइट हो।
क्याफे, रेस्टुरेन्ट, पर्यटक, विद्यार्थी, बगैंचा, संग्रहालय, दुकानहरु, यो जिल्ला सुपर लोकप्रिय छ त्यसैले एक छ पेरिसको लागि यात्रा यो ल्याटिन क्वार्टरमा पैदल यात्रा बिना पूरा हुँदैन।
1 ल्याटिन क्वार्टर
2 ल्याटिन क्वार्टरमा के हेर्ने
नाम कहाँबाट आयो? मध्य युगबाट, जब सोर्बोन विद्यार्थीहरू छिमेकमा बसोबास गर्छन् र तिनीहरूले ल्याटिनलाई अध्ययन भाषाको रूपमा प्रयोग गरे। केहि कुरा जुन आज सम्म जारी नै छ, त्यो साइट विद्यार्थीहरूले भरिएको छ। १ th र २० औं शताब्दीमा यि विद्यार्थीहरूले उक्त समयको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनहरू आयोजना गरे, उदाहरणका लागि, लोकप्रिय मे '68।।
त्यसोभए, यहाँ वरिपरि हिंड्नु अघि उत्तम कुरा भनेको ल्याटिन क्वार्टरको ईतिहासको बारेमा थोरै पढ्नु हो। फाइदा लिनको लागि, बुझ्नुहोस् र अर्को हेराई गर्नुहोस्। अगाडिको ढोका प्राय: प्लेस डी सेन्ट मिशेल हुन्छ, जसको फ्याउरेन अजगरसँग छ। सडकहरूको चक्रव्यूह बाहिर पट्टि खुल्छ जहाँ त्यहाँ छन् रेस्टुरेन्ट र क्याफे, टेरेसहरू सहित केहि, यद्यपि मुख्य र सबै भन्दा लोकप्रिय सडक Rue Huchette हो।
ल्याटिन क्वार्टरमा के हेर्ने
El Cluny संग्रहालय यो एक सानो संग्रहालय हो जुन मध्य युगका खजानाहरू छन्। यो Cluny को Abbots को पुरानो निवास मा संचालन र यहाँ तपाईं छ महिला प्रख्यात tapestries देख्नुहुनेछ जो लेडी र युनिकोर्न को रूप मा परिचित छ। रंगीन, हस्तनिर्मित, of शताब्दी भन्दा बढी अस्तित्वको साथ।
यी खजानाको साथसाथै यस ठाउँसँग राम्रा बगैंचाहरू पनि छन्। अवश्य पनि, यो क्षणमा यो बन्द छ। यो नविकरण अन्तर्गत छ र गत सेप्टेम्बर २ it मा यसले २०२२ सम्म यसको ढोका बन्द गर्‍यो। अर्को चाखलाग्दो र लोकप्रिय साइट हो शेक्सपियर र कम्पनी पुस्तक पसल, जसको पहिलो पेरिस स्टोर १ 1919 १ in मा खुल्यो।
भवन १ dates औं शताब्दीको सुरुदेखि हो, जब यो गुम्बा थियो, तर पुस्तक पसल १ 50 s० को दशकको हो। स्टोर फर्नीचर, एक पियानो, typwriters, र अधिक संग विचित्र छ। यदि तपाईं पुस्तक किन्नुहुन्छ भने यो पुस्तक पसलको लोगोले स्टम्प्ड हुनेछ, र यदि तपाईं नजिकै बस्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले अर्को ढोकाको क्याफेटेरियामा कफि पाउनुहुनेछ, सीनलाई हेरेर।
Pantheon यो ल्याटिन क्वार्टरमा पनि छ। यो कुनै समय ठूलो गुम्बज भएको चर्च थियो तर आज यो धर्मनिरपेक्ष छ र फ्रान्सका नायकहरुलाई श्रद्धांजलि दिन्छ। यहाँ गाडिएका भोल्टेयर, भिक्टर ह्यूगो, क्युरी दम्पती र एन्टोइन डी सेन्ट-एक्सुपरी र लुइस ब्रेली। बिरामी अवस्थाबाट निको भएपछि उक्त भवनलाई चर्चको रूपमा लुइस चौधौंले निर्माण गर्ने आदेश दिइयो र यसैले, यो गोथिक र शास्त्रीय हावाको साथ १ 1791 XNUMX with मा सम्पन्न भयो।
गुम्बज विशाल र खुला छ र यसको मुनि यो प्रसिद्ध अवस्थित छ फोकल पेंडुलम (के तपाईंले Umberto Eco द्वारा homonymous पुस्तक पढ्नुभयो?)। पेंडुलम पृथ्वी घुमाउछ भनेर देखाउन फुकलको प्रयोग हो।
अर्कोतर्फ, ल्याटिन क्वार्टरको अन्त्यमा हो लक्जमबर्ग बगैंचाविशेष गरी सप्ताहन्तमा भीड। त्यहाँ थुप्रै रूखहरू, मार्गहरू, व्यक्तिहरू कुरा गरिरहेका वा शारीरिक गतिविधि गरिरहेका छन्। मध्य पोखरी वरिपरि त्यहाँ बस्न कुर्सिहरु छन्, केहि धेरै सामान्य।
बगैंचाको मुटु शाही महल हो। बगैचाहरु १1612१२ बाट मिति र फ्रान्सको महारानी राजकुमारी मारी डी मेडीसी द्वारा डिजाइन गरिएको थियो। आज दरबार फ्रान्सेली सिनेटको रूपमा कार्य गर्दछ। बगैंचाले १०० भन्दा बढी मूर्तिकलाहरु लुकाउँदछ र एक लिबर्टीको प्रसिद्ध स्ट्याचूको सानो स्तरको प्रतिकृति फ्रान्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका लाई उपहार दिएको थियो। त्यहाँ सुन्दर र शान्तिमय मेडिसिन फवारा छ।
अर्को सुन्दर बगैचा हो जार्डिन डेस प्लानेट्स, ot 4500०० भन्दा बढी बिरुवाहरु सहित एक वानस्पतिक बगैचा: एक गुलाब बगैचा, एक अल्पाइन बगैचा र एक आर्ट डेको-शैली जाडो बगैचा। त्यहाँ १ th औं शताब्दीका सुरुका तीन ठूला नर्सरीहरू पनि छन्, सुन्दर धातु र गिलास संरचनाहरू। प्रवेश निःशुल्क छ, तर यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ भने चिडियाखाना र प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयमैले टिकट तिर्नु पर्छ। उत्तरार्द्ध संग्रहालयमा खनिजहरूलाई समर्पित ग्यालरी छ, अर्को विकासको लागि र अर्को प्यालेन्टोलजीको लागि।
अर्को रोचक संग्रहालय हो क्युरी संग्रहालय। यो काम गर्दछ जहाँ उनी आफैं काम गर्छिन् र रेडियोएक्टिविटी र बिजुली अध्ययन गर्थे। मेरी क्युरी, यो सँधै सम्झन लायक छ, नोबेल जित्ने र सोर्बोनमा प्राध्यापक हुने पहिलो महिला थिइन्। यहाँ पुरानो वैज्ञानिक उपकरण र एक सुन्दर सानो बगैचा छन्। साइट बुधबार शनिबार देखि १ देखि 1 बजेसम्म खुला रहन्छ।
को शर्तहरु ल्याटिन क्वार्टर गिर्जाघरहरू त्यहाँ चार छन् कि परिदृश्य हावी: सेन्ट-इटिएन, संत-सेभेरिन, सेन्ट जुलिअन ले पाउवर र सेन्ट मर्डार्ड। सबै धेरै सुन्दर।
हिँडिसकेपछि वा अन्तमा वा अन्तमा, फ्रेन्च क्याफेहरू र रेस्टुरेन्टहरूले जहिले पनि विश्राम लिन, केहि खान र पिउन लोभ्याउँछन्। मा Sorbonne वर्ग त्यहाँ लेस पाटिओस, एक सुन्दर क्याफेटेरिया छ। अर्को ढोका Tabac De La Sorbonne हो, स्वादिलो ​​खाजाको लागि उत्तम क्रोइसन्ट्स.
अवश्य पनि, त्यहाँ अधिक साइटहरू छन् र मलाई लाग्छ कि तपाईंले आफ्नो मनपर्ने खोजी गर्नुपर्नेछ। त्यहाँ धेरै छन् र उत्तम कुरा भनेको आफैलाई जान दिनुहोस्, भटकनुहोस् र तपाईंको ध्यान आकर्षण गर्ने ठाउँमा रोक्नुहोस्।
ल्याटिन क्वार्टरमा मनमोहक सडकहरू, साना वर्गहरू, ऐतिहासिक भवनहरू, फल्याकहरू सहितको मूर्तिहरू जुन तपाईंलाई पढ्नमा रुचि हुन सक्छ, सबै प्रकारका पसलहरू। को एक फोटो ढोका ढोका मैले यो याद गर्न पनि सकेन। यो १1370० देखि व्यवसायमा छ र ईन्जिनियरि of्गको एक उत्कृष्ट अंश हो। न त भित्र हिंड्न सन्त चैपल। वर्षौं पहिले जब म गएको थिएँ, यो पुनर्स्थापनमा थियो र यो अझै पनि एक सौन्दर्य थियो। दागको काँचका विन्डोजहरू राम्रा र विवरणहरू छन्। हे भगवान!
यदि तपाईले अपार्टमेन्ट र किचेन भाँडामा लिनुभयो भने, १ walk s० को दशकमा एउटा पुस्तक लेख्ने अमेरिकी कूटनीतिज्ञकी श्रीमती जूलिया चाइल्डको पाइला पछाडि हिंड्नु राम्रो हुन सक्छ। जुली र जुलीलाई उनले शपिंग गरिन रु माउफेटार्ड मार्केट। स्टालहरू बिहान at बजे खुल्ला हुन्छ, दिउँसो बन्द हुन्छ र दिउँसो फेरि खोल्छ।
यदि तपाइँमा रुचि छ मुस्लिम संस्कृति, किनभने पेरिसमा यो पनि छ र छिमेकमा यो प्रतिनिधित्व गर्दछ पेरिस को महान मस्जिद, शहर मा सब भन्दा ठूलो, १ 1926 २। मा स्थापना भयो।
अवश्य पनि यसको बगैचा सुन्दर छन् र यसको अत्यधिक सिफारिश गरिएको रेस्टुरेन्ट र चिया हाउस छ। उस्तै लाइनहरुमा अरब विश्व संस्थान, जसले अरब वैज्ञानिक र सांस्कृतिक योगदान खोजी गर्दछ। भवन २० औं शताब्दीको अन्ततिर १ 80 the० को दशकदेखि जीन नोभेलले डिजाइन गरेको समकालीन संरचना हो। यसको उद्घाटन सूर्यको प्रकाशको हिसाबले नजिक र खुला छ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुनेछ, ल्याटिन क्वार्टरको पेरिसमा केहि थोरै छ र यसले तपाईंलाई निराश तुल्याउँदैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » पेरिस » पेरिसको ल्याटिन क्वार्टरमा पैदल यात्रा